Sekolin’ny mozika : Nanolotra ny « Noelin’ny mahantra » -
AccueilSosialySekolin’ny mozika : Nanolotra ny « Noelin’ny mahantra »
24/12/2018 admintriatra Sosialy 0
Matetika dia mitondra hafaliana ho an’ny mpiangaly azy sy ny mpihaino azy ny mozika. Ankoatra ny fampianarana mozika, dia miezaka mizara hafaliana ihany koa ny Ecole de Guitare de Madagascar na ny EGM 67ha, na nanolotra ny « Noelin’ny mahantra » ny sabotsy lasa teo. Vokatry ny fifanoloran-tanana sy fiaraha-miasa teo amin’ny sekoly sy ny mpianatra, ireo ray aman-dreny, ny havana sy ny malala-tanana no nahafahana nanatontosa izany hetsika izany. Ao anatin’ilay teny filamatra « sambatra kokoa ny manome noho ny mandray », no nanatanterahan’ny EGM ity hetsika ity. Ankizy manodidina ny 600 no nahazo tombony tamin’izany. Ankoatra ireo mpiara-miasa 15 mandrafitra ny EGM, notarihin’ny taleny, Aintsoniony Ranaivo, dia nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fizarana ireo kilalao, fitafiana, vatomamy… ireo izao mpirotsaka an-tsitrapo 10 mianadahy. Hita taratra teny amin’ny endrik’ireo ankizy zanaky ny fianakaviana sahirana monina eny 67ha sy ny manodidina ny hafaliana sy ny tsiky nahazo ireo fanomezana ireo.
Tsiahivina fa sekoly fianarana mozika ny Egm nefa tsy miolonolona amin’izany fa mahatsapa ny fisian’ireo olona manodidina azy. Ankoatra ny etsy 67ha, izay nanombohan’ny sekoly, dia efa manana sampana maro manerana ny Nosy ihany koa ny Egm, toa ny eny 67ha atsimo, Anjanahary, Ambatonakanga, ary vao nanampy ireo ny eny Ampefiloha ho an’ny eto an-drenivohitra. Misy ihany koa anefa ny sampana any Antsirabe, Toamasina, Mahajanga.
Anisan’ny fivoarana farany nentin’ny sekoly ny fametrahana azy ho « Conservatoire » ho an’ny mozika eto Madagasikara, izany hoe misy fanadinana ara-panjakana. Anisan’ny tanjon’ny sekoly hatramin’izay ny haha-matihanina ny mpahay mozika.